Miteraka Adihevitra Momba Ny Fahalalahana Miteny Ny Fandroahana Ilay Mpanazatra Tao Meksika · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraPeriodismo en las Américas
Voadika ny 26 Aogositra 2015 6:28 GMT
Iray amin'ireo kisary namboarin'ny mpampiasa aterineto mifandraika amin'ny fifandonana nisy tamin'i Herrera “Lay Hao” sy i Christian Martinoli, mpanao gazety, izay niafara tamin'ny fandroahana ilay mpitantana ny ekipan'i Meksika.
Nivoaka voalohany indrindra tao amin'ny bilaogy Periodismo en las Américas ity lahatsoratr'i Mariana Muñoz ity ary naverina navoaka etoana rehefa nahazoana alàlana avy aminy.
Niteraka adihevitra nanenika ny firenena momba ny fahalalàhana miteny ny fandroahana vao haingana nanjo ny mpanazatra ny ekipam-pirenen'i Meksika, Miguel Herrera, na “El Piojo” (Ilay Hao), noho ny herisetra voalaza fa nataony taminà mpanao gazety.
Lazain'i Christian Martinoli, mpitatitra vaovao sy mpanolotra ao amin'ny TV Azteca, fa namely totohondry azy teo amin'ny tendany i Herrera raha nifankahita tao an-tseranam-piaramanidina tao Philadelphia, Etazonia, ry zareo tamin'ny 27 Jolay, araka ny nambaran'ny gazety AS Mexico.
Milaza koa i Martinoli fa nanosika azy ny zanakavavin'i Herrera ary nivazavaza taminy hiàla teo, araka izay voarakitra anaty lahatsary zaraina ao amin'ny Univision.
(lahatsary amin'ny fiteny Espaniôla)
Niezaka ny hamaly bontana ilay mpanao gazety i Herrera ary nandrahona azy, tamin'ny fitenenana hoe, “Izao no hataoko isaky ny hitako ianao!” hoy ny filàzan'i Martinoli.
Araka ny “CNN Mexico”, disadisa nateraky ny fanehoankevitra nataon'i Martinoli io, taorian'ny faharesen'ny ekipa Meksikana tamin'ny lalao nifanaovany tamin'i Ekoatora, ny 19 Jona teo. (“Mpitantana no ilain'i Meksika fa tsy mpitarika andianà mpitsinjaka—mpitantana iray fa tsy mpiasam-barotra,” hoy i Martinoli tao anatin'ny fandaharany ho an'ny TV Azteca.)
Ny andro nanaraka izay, nandritry ny tafa ho an'ny mpanao gazety, naverin'i Herrera ho any amin'ilay fanehoankevitr'i Martinoli ny resaka, ary nilazàny fa, “hotadiaviko izy ary hopehako,” na dia tsy notononiny aza ny anaran'ilay mpanao gazety.
Nitohy tao amin'ny Twitter ny fifanenjanan'ny roa tonta. Ny 21 Jona, novalian'i Martinoli ny fanehoankevitr'i Herrera tao amin'ny kaontiny, niampanga azy ho “barrabrava” (jiolahimboto hooligan). Avy eo namaly i Herrera, nilaza fa te-hihaona amin'i Martinoli any ananonanona any “handaminana ny adin-dry zareo”:
Tsy toy izao loatra aho saingy tena manantena aho ny hihaona aminao any ananonanona any. Mba handaminana ny adintsika
Lavin'i Herrera ny fisian'ilay fifandonana tao amin'ny seranam-piaramanidina ary isisihany ny filazàna fa tsy olona “gaigy” manao ahoana izy ka ndeha hanafika mpanao gazety any anaty seranam-piaramanidina Amerikana.
Ny 28 Jolay, nivoaka ho ofisialy ny fandroahana an'i Herrera, rehefa nanambara tao anaty tafa ho an'ny mpanao gazety i Decio de María, filohan'ny Federasiôna Meksikana misahana ny Baolina Kitra, fa antony iray amin'ny fandehanan'i Herrera ny tsy fahampian'ny fanajàny ny fahalalahàna maneho hevitra :
Tsy manana toerana eo anivon'ny fiarahamonina, ny fianakaviana ary indrindra fa ny fanatanjahantena ny herisetra. Na iza na iza te-hanomboka rombo, na tsy manana hevitra na fomba fijery ny fotokevitry ny fahalalahana maneho hevitra, dia tsy afaka ho mpikambana ato anatin'ny Federasiôna Meksikana misahana ny Baolina Kitra.
Eken'i Decio de María ny fahombiazan'i Herrera na tao anatiny na teny ivelan'ny kianja, saingy nambarany fa “tsy ny isa no hisongona ny sata mifehy, ny fitsipika, ary ny fanajàna ny fahalalahana maneho hevitra.”
Ny androtr'iny ihany, namoaka fanambaràna iray i Herrera nanolorany fialantsiny ho an'ireo mpankafy, mpilalao, tale samihafa, ary ny media. Tsy miresaka an'i Martinoli ilay fanambaràna.
Ny olona sasany manomboka manontany ny fomba nanakianan'i Martinoli an'i Herrera mpanazatra.
Pablo Carrillo, mpitatitra ara-panatanjahantena ao amin'ny Grupo Imagen Multimedia, nanoratra tao amin'ny Twitter hoe :
Mba manontany tena koa aho raha toa ka tokony ho tamim-panajàna kokoa ve, somary tsy dia manohina, mahafinaritra no fomba nitantaràna ny zava-nisy, fa tsy nasiana sira be loatra? Apetrako ny fanontaniana momba io.
Tato ho ato dia hita tany anaty media sôsialy ihany koa ny fanohanana ilay mpanao gazety, misy tamin'ireo olona aza no namorona mihitsy ny tenifototra #YoSoyMartinoli MartinoliAho) ho entiny maneho ny firaisankinany amin'ilay mpanao gazety mpanolotra vaovao. Naneho ny fanohanany an'i Martinoli tao amin'ny Twitter ireo mpanao gazety isan-tsokajiny, toa an'i Paola Rojas ao amin'ny Foro TV, David Failteson ao amin'ny ESPN sy León Krauze, ary ny hafa.
Fitondrantena tsy azo ekena ny nataon'i @MiguelHerreraDT Miray hina amin'i @martinolimx aho